Haddii laguu oggolyahay in aad joogtid Sweden - Migrationsverket
Om du får stanna – somaliska
Adiga oo soo codsaday magangelyo iyo la siiyay ruqsadda deggenaanshada waxaad xaq u leedahay inaa ku noolaatid iyo ka shaqeysatid Iswiidhan.
Boogyadaan hoostaan ku qoran waxaad ka heleysaa warbixin khuseeyso adiga oo magangelyo codsaday iyo loo oggolaaday ruqsadda deggenaanshada oo Iswiidhan. (Boogyadaan qaarkood dhammaan luqadaha ma lagu helo.)
Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo qoxootinimo waxeey ansaxsanaan 3 sano.
Inta ka akhriso warbixin ku saabsan ruqsadda deggenaanshada oo qoxootinimo
Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo difaacida nooca kale waxeey ansaxsanaan ruqsadda 13 bilood.
Inta ka akhriso warbixin ku saabsan ruqsadda deggenaanshada oo difaacida nooca kale
Haddii adiga haysatid ruqsada degnaanshada oo qiimeynta qaxooti ama baahi u qabid difaac, ama suurtagaleyn in lagu tarxiilo ama xaalado qaas jiran waxaa suurtagal ah inaa xaq u leedahay qoys midoobida.
Inta ka akriso fursadaha adiga haysatid markey noqoto qoys dib u mideeynta
Haddii adiga kuu suurtagaleyn inaa wadankaada hooyo baasaaboor ka soo suubsatid waxaa ka dalbankartaa baasaaboor Hay’adda socdaalka.
Inta ka akhriso baasaaboorka dadka ajnabiga (oo af ingiriis)
Inta ka akhriso baasaaboorka dadka ajnabiga oo ku meel gaarka (oo af ingiriis)
Inta ka akhriso baasaaboorka safarka (oo af ingiriis)
Haddii aad dooneysid inaa Iswiidhan sii joogtid markeey dhammaado wakhtiga ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka waxaa qasab ah in adiga soo codsatid in wakhtiga laguu dheereeyo.
Inta ka akhriso waxbixin ku saabsan qofka soo codsankaro dheereynta wakhtiga ruqsadda deggenaanshada (oo af ingiriis)
Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka iyo isku filantahay oo is masruufikartid oo mushaar shaqo ku nooshahay ama shirkad ku leedahay Iswiidhan adiga waxaad soo codsankartaa ruqsadda deggenaanshada oo joogtada.
Inta ka akhriso shuruudaha iyo sidaa usoo codsaneysid ruqsadda deggenaanshada joogtada oo qofka masruufkiisa ku filan (oo af ingiriis)
Adiga waxaa ruqsada degnaanshada joogtada soo codsankarta marka aad soo codsaneysid dheereynta ruqsada degnaanshada.
Inta ka akhriso shuruudaha lagu helo ruqsada degnaanshada joogtada (oo ingiriis)